Vokatra 40 izay miasa tsara SO, manana famerenana marika 5-kintana izy ireo Site med
Ny ankamaroan'ny fotoana dia mividy vokatra an-tserasera ianao ary tsy manantena be loatra amin'izany ianao, ankoatra ny fanatontosana ny tanjona kendrena azy. Fa isaky ny vetivety izany dia misy zavatra mipoitra eo am-baravarankely izay miakatra sy mihoatra, toy ny amin'ireto vokatra 40 be ireto, izay zatra ny fanantenany.
Ny mety dia, nahita ny sasany amin'ireo vokatra ireo hita ao amin'ny lisitra lisitra an-tserasera hafa, ary izany dia satria tena mendrika ny toerana misy azy ireo izy ireo. Zava-misy amin'izao fotoana izao: ity blaogera blaogera portable izay nalaina tamin'ny famerenana Amazon dimy kintana dimy arivo ity. Tsy vitan'ny hoe manolotra feo stereo mampientam-po sy feno be izy io, fa manome 12 ora lava kokoa amin'ny fotoana filalaovana. Ary satria tsy mahazaka rano izy, dia safidy tsara raha mandany ny andro eo amin'ny farihy ianao na manantona kamory. Ho hitanao ato ihany koa ny, ny toy ny menaka magnesium topikal izay manampy amin'ny fanalefahana ny hozatra taorian'ny fanazaran-tena (na ora vitsivitsy nandanianao antso fiasa) amin'ny telefaona anao.
Raha mbola tsy gaga ianao noho ny vokatra vita amin'ny fotoana fohy, dia mikasa hotsaboina. Ireo zavatra rehetra ireo dia ankatoavin'ny famerenana ary misy amin'ny fandefasana maimaim-poana roa andro ao amin'ny Amazon.
Ny vokatra tianay ihany no atolotray ka heverinay fa ianao koa. Azontsika atao ny mandray ampahany ampahany amin'ny varotra novidina tamin'ity lahatsoratra ity, izay nosoratan'ny ekipan'ny varotra eto amintsika.
Nandeha andro vitsivitsy? Ity fakantsary fiarovana amin'ny trano ity dia miaraka amin'ny fampiharana iray, mba hahafahanao mihinana mivantana mivantana mikoriana mivantana amin'ny telefaona. Na dia tsara kokoa aza, azonao atao ny mampiasa ny fampiharana hametaka ny fakantsary ary hahazoana ny fijerin'ny efitrano iray manontolo. Misy kinila 12 segondra noraketina isaky ny hita ny hetsika, avy eo tehirizina ao anaty rahona, mba hahafahanao mamerina azy io aoriana kely.
Hetezo ny tariby ary alao ny fahitalinao amin'ny alàlan'ny Amazon Fire Stick, mba hahafahanao mamakivaky horonantsary sy tantara an'arivony maro miaraka amin'ny tsindry fotsiny lavitra. Izy io dia mifanentana amin'ireo serivisy streaming rehetra ary ny fidirana amin'ireo seho sy ireo sarimihetsika ao amin'ny Amazon Prime dia maimaim-poana tanteraka. Fanampin'izany, miaraka amin'ny fampiasa Alexa, afaka mampiasa baiko amin'ny feo ianao raha te hahita izay tena tadiavinao.
Mety amin'ny famonoam-borona, ny fihazana ary ny fitsangantsanganana, ireo goavam-bolo ireo dia manolotra fampiroboroboana mahery vaika 12x ary ampiasana fitaovana maivana, ka azonao atao foana ny mampiasa azy ireo rehefa manomboka milentika ny masoandro. Ny kaopy volom-bony mety tsara dia apetraky ny olona manao solomaso, ary ny boribolika miforitra kely, ka afaka mandatsa-paka ao anaty fonosanao ianao.
Ny zavatra kely dia miteraka fahasamihafana lehibe, toy ireny kofehy ireny izay miaro ny taribinao tsy hihemotra ankavanana izay tena mitanondrika indrindra. Mivezivezy mora foana ny collars mora foana ary mety ho an'ny ankamaroan'ny tariby, anisan'izany ny tariby USB, micro-USB ary tselatra. Ny fizarana tsirairay dia miaraka amin'ny amboara marobe multi-collard.
Raha miatrika fihenjanan-tsaina ianao, maina, na fefy matevina, io kirihitra tongotra matevina io no ilainao mamerina azy ireo amin'ny endriny. Namboarina tamin`ny doka lehibe allantoin - moisturizer tsy manam-paharoa izay misintona ny sosona hoditra madiodio hamoaka hydration lalina. Apetaho eo alohan'ny hatory ary manomboka manomboka miova ny tongotrao ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Fampiasam-bola lehibe amin'ny fahasalamanao, ity probiotic ity dia misy lalànana 12 ary alàlan'ny fandefasana ny fotoana izay mamerina ny fifandanjana amin'ny tsinainao, miasa mba hanohanana ny hery fiarovana sy ny fandevonan-kanina, ary koa manentana ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pihetseham-po (eny, ny vavoninao dia ny anao "atidoha") faharoa. Izy io dia vegan, kosher, tsy GMO, ary maimaim-poana amin'ny alerine mahazatra toy ny varimbazaha, gluten, ary voanjo.
Misaotra anao ity mpanadio ity, fa tsy misy intsony ny mijoro manontany tena hoe hatraiza ny fitrandrahana azonao arotsaka ao anaty rano. Mora refesina tsara eo amin'ny dosie roa izy ary matanjaka be amin'ny alàlan'ny volo, savony, taratasy ary baomba grika. Ampiasao amin'ny fandroana na fandroana ary fandroana an-dakozia.
Ny fampiharana ny hoditra amin'ny magnesium dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hitrandrahana ny soa azo avy amin'ity mineraly mahagaga izay ahafahana manalefaka ny hozatra, manafaka ny fikosoham-bary, manakana ny migraine, mampihena ny fihetseham-po, ary mampiroborobo ny torimaso tsara. Ity menaka magnesium ity dia avy amin'ny Ranomasina Maty, ary ny mpijery Amazon dia mianiana amin'ny valiny, miaraka amin'ny soratra iray fa "mahatalanjona ny fanaintainan'ny hozatra sy ny hozatra."
Tian'ireo mpizara A-list izay mandeha tsy tapaka ny karipetra mena, ity lotion dry Mario Badescu ity dia fomba feno hadalana hanesorana ireo kilema rehefa mipoaka izy ireo. Ny pôtôsitra ankafizin'ny kolotsaina dia atao miaraka amina mifangaro zina sy asidra salicylic, miaraka amin'ny calamine hanamaivana ny menaka sy ny fihanahana. Apetaho alohan'ny hatory, ary manaova fehiloha mazava kokoa.
Tazony ho toy ny vaovao ny sisan-javatra sisa tavela amin'ny alina nahandroanao azy voalohany amin'ireto fitoeran-tsakafo fitehirizan-tsakafo ireto izay manenjana mba hihoatra ny lovia sy ny lovia. Namboarina avy amin'ny silicone maimaimpoana BPA, izy ireo dia miaro amin'ny hafanana ary tsy miaro amin'ny lovia, ary ny fonosana tsirairay dia miaraka amin'ny molotra fito amin'ny habe samihafa.
Raha mbola tsy nanandrana bodofotsy mavesatra taloha ianao, dia te-hiroso ianao ary manindry ny "Add to Cart". Ny lanja dia manampy amin'ny fanentanana ny famokarana dopamine sy serotonin, izay afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny tebiteby, hampiroborobo ny torimaso ary ahafahana misintona haingana kokoa. Hita amin'ny lanja isan-karazany izany - misafidy ny iray amin'ny 12% amin'ny lanjan'ny vatanao.
Ity sakana roa mikapoka tongotra ity dia misy manonja iray amin'ny lafiny iray mba hamonoana sy hampihenana ny hoditra maina sy calluses, ary amin'ny lafiny iray kosa dia savony emollient vita amin'ny aloe, dibera shea ary vitaminina E. Ampiasao tsy tapaka ity amin'ny tongotra izay mijery ary mahatsiaro ho malefaka - tsy baranahiny.
Miaraka amin'ity mpiaro amin'ny holatra vita amin'ny holatra ity dia azonao antoka fa tsy misy volo hidina amin'ny tatatra ary hiteraka bakona. Namboarina mba hifanaraka amin'ny tatatra fantsona mahazatra, mahatratra ny tadim-bolo sy mametaka azy ireo manodidina ny cylinder afovoany, fa ny fihoaran'ny rano dia mamela ny rano hikoriana malalaka, noho izany dia tsy hijanona ao anaty refy iray ianao mandritra ny shampoo.
Mpankafy ankafizin'ny mpijery Amazon misy kintana dimy an'arivony, ity miteny Bluetooth portable ity dia mampifandray an-tserasera amin'ny fitaovana rehetra ary manome feo stereo tsara kalitao mandritra ny 12 ora amin'ny vidiny tokana. Izy io dia rano madio IPX7, ka afaka mankafy ny mozika manodidina ny dobo na amin'ny tora-pasika ianao, ary ny fanamafisam-peo miorina eo amin'ny lozika dia midika fa tsara ho an'ny antso koa. Misafidiana amina loko sivy.
Tsara amin'ny fanaovana ny lovia ary manadio ireo lamba azo ampiasaina ireo dia vita amin'ny cellulose sy landihazo be dia be, ary ny fonosana enina iray dia afaka manolo ireo lamba firakotra vita amin'ny 90 horonana. Tonga lafatra raha toa ka mandeha amin'ny tokantrano tsy misy fatiantoka ianao dia afaka manasa milina izy ireo ary tsy hikoropaka na hikorontana.
Raha miatrika aretin-doha na migraine ianao, fantatrao ny manelingelina azy ireo, fa ity fitaovana acupressure ity dia mety hanome famafana voajanahary. Amin'ny alàlan'ny fametrahana amina paikady amin'ny teboka acupressure L14 (eo anelanelan'ny ankibenanao sy ny razanao) dia hanome fandefasana fanafody fitsaboana hanamaivana ny fanaintainana izany nefa koa mandanjalanja ny angovo ary mampihena ny fihenjanana.
Ny bobongolo, ny hatsiaka ary ny fofona mofomamy dia zava-manahirana mahazatra any an-tokantranon'ny sokajin-taona rehetra, fa ny etona hamandoana kosa dia mora hamboarina. Ahodino fotsiny ny tampony ary mahasarika sy mandentika ny hatsiaka be loatra izy, avelao ny hivoahan'ny efitrano sy fanamainana. Ny mpandinika iray ao amin'ny Amazon dia nanoratra hoe: “Mampihena ny fahalemem-panahy ao amin'ny efitrano fandroako, ary maharitra ela izany! Tsara lavitra noho ny vahaolana hafa rehetra notahinay. Esory ny fofona mofomamy izay mamoa anay nandritra ny volana maro. ”
Mampahery tokoa ny manary ny voka-dratsinao rehetra ary miafara amin'ny faran'ny lozinao, fotsiny ny manokatra azy rehefa feno groceries ianao ary mifanatrika tsindry. Ity mpikarakara fantsom-baravarana ity dia hikapoka izany fironana izany, isaorana ny fizarana lehibe roa ho an'ny entana lehibe kokoa sy ny paosin-java-manakaiky ny sisiny ho an'ny fitaovana sy ny fitaovana. Fanampin'izay, mivezivezy ny zavatra rehetra rehefa tonga ny fotoana hametrahana valizy vita.
Diovy tsara ny talenta vy sy ny vatan-tsolika vita amin'ny vy. Ny bristles fohy dia hentitra mba hanomezana fikosoham-bary tsara, raha ny fizarana masiaka kosa dia mamela anao hiditra any amin'ny zoro ary miasa amin'ny sakafo mihidy ny mpivarotra. Izy io dia fomba mahomby hanadiovana tsy misy savony, ka afaka mihazona ny vanim-potoana fitrandrahana tsara ny palianao.
Tena matanjaka mitazona 15 kilao nefa tsy mikorontana, dia ilaina ireny fihantona fitahirizana ireny ho an'ny fanantonana bokotra, sary, andry ary maro hafa. Hifametaka amin'ny haingam-pandeha rehetra izy ireo, ao anatin'izany ny vazo sy ny fitaratra, ary satria mangarahara izy ireo dia saika tsy hita maso. Miorina amin'ny adhesive, izy ireo koa dia mametraka mora ary mora esorina nefa tsy manimba vela na aiza na aiza.
Mpankafy mpankafy (ahem) iray hafa, ity mpankafy matanjaka nefa mahery ity dia nahazo famerenana Amazon 17 000 kintana dimy. Ny mpankafy ny hafainganam-pandeha telo dia mivezivezy ny rivotra mba hanomezana fanampiana any amin'ny efi-trano mahamay, ary ny lohany dia mahatratra 90 degre, ka azonao atao ny mikendry ny fampidiran-drivotra na aiza misy anao. Saingy tsy toy ny mpankafy mahery vaika hafa, dia misy dian-tongotra kely izany hipetraka eo amin'ny latabatrao na latabatra kafe.
Raha tianao ny mihaino mozika, misaintsaina na podcast raha milatsaka ka matory ianao, io mason-tory Bluetooth io no tena ilainao. Ny saron-tava momba ny bara fahatsiarovana dia manasongadina ireo mpihaino Bluetooth, ka afaka mihaino ny lisitry ny lisitry ny lisitra ianao mandritra ny fotoana mitovy. Fanampin'izany, ny faran'ny saron-tava dia mampiditra am-bava sy fanaraha-maso ny lalao / pause amin'ny fandidiana mora.
Misaotra an'ity kirihitra mandeha amin'ny tongotra ity ianao, afaka manome tavy miasa mafy ianao rehefa mandoa. Ny tsihy dia ahitana an-jatony ny silicone fikosoham-bary mavokely an-jatony, miaraka amin'ny kaopy tsy misaron-doha amin'ny faran'ny ambany mba hihazonana azy tsara amin'ny tany mandro.
Collagen dia rindrina fananganana fototra tena ilaina amin'ny rafitry ny rafitra maro ao anatin'izany ny volo, ny fantsika, ny hoditra ary ny tonon-taolana, ary ity vovobony kolesterola ity dia fomba iray mora sy mahomby hanalana azy bebe kokoa. Miaraka amin'ny famoahan'antoka 20 grama isaky ny fanompoana, tsy misy tsirony ary tsy misy gluten, ary mihena ao anaty rano mafana na mangatsiaka, toy ny kafe, rano, smoothie, ary zava-pisotro misy proteinina.
Miankina amin'ny milina fanasan-damba isika mba hadio hatrany ny fitafiantsika, fa - manao ahoana ny fahadiovan'ny milina fanasana? (Ny mozika andro manenjika.) Mandefasa entana miaraka amin'ny takelaka iray amin'ny masinina fanadiovana iray volana isam-bolana mba hanadiovana ny ambiny sy ny basy ary azo antoka fa madio ny fidiovanao.
Ny fipetrahana eny an-tokontany tsy mila midika hoe mandany ny andian-drongona ianao amin'ny tolakandro - manantona ireo fandrika manidina mba hisintonana bibikely manelingelina, ka hahafahanao mankafy ny any ivelany. Voaporofo fa mahatratra babo 20 000, izay tsy maintsy ataonao dia ny fampidirana rano ao am-ponenana ao anatiny mba hampitaona ny lalitra.
Ny fandaniana fotoana bebe kokoa any ivelany dia mety midika fa ny moka sy ny antsy manimba ny lalao maloto, fa io voatabia fanaraha-maso io dia natao hanakanana ireo bibikely mandritry ny efatra herinandro, na dia aorian'ny orana aza. Ampidiro fotsiny ny hose zaridaina mahazatra hanaparitanao azy eny an-tokotaninao, ary handringana ny moka sy ny antsy ary ny parasy.
Raha fohy amin'ny seranan-tsambo USB ianao dia afaka mampiasa ity haben'ny USB ity hanomezana fitoerana plug-nao bebe kokoa. Mifanaraka amin'ireo rafitra fandefasana Windows sy Mac, dia misy seranana efatra izay azo atokisana tsirairay avy ary hampandeha tsara ny fahefana, ary ny habeny tsy miendrika mihama-peo tsy maka toerana tsy ilaina amin'ny latabatrao.
Namboarina tamin'ny silicone 100%, mora maina haingana kokoa noho ny sela selulosa ireo mason-tsakafo ireto, izay midika fa tsy hasiana mikraoba na fofona. Mahafinaritra izy ireo amin'ny fanesorana na dia ny mofomamy voafidy mafy indrindra aza, ary hosodin'izy ireo soa aman-tsara sy tsy misy fahasimbana ny masirasanao rehetra. Ny fonosana tsirairay dia miaraka amina baomba telo.
Atsipazo miaraka amin'ny entanao manaraka ireo baomba vita amin'ny volon'ondry ity, ary hanampy azy ireo hifindra rivotra izy ireo ka vita haingana ny fanasan-damba (izay, hiarovana ny angovo sy hampihenana ny volavolan-pahefana). Miasa koa izy ireo mba hanalefahana akanjo sy hanakanana ny fikosoham-bary, izany hoe tsy mila manangona entana amin'ny lamba maina ianao amin'ny manaraka ny fivarotana.
Ity raketa fanamainana lovia ity dia azo apetraka eo amin'ny lalanao, ka ny rano rehetra dia midina mivantana ao anaty tatatra, fa izany koa no fomba tsara indrindra hanamorana voankazo sy legioma raha tsy manana colander mahomby ianao. Ary rehefa vitanao ny mampiasa azy io dia mety hanamboarana fitahirizana izy io, mba hahafahanao mandrobona azy eo ambanin'ny masinina.
Raha mitady zavatra ratsy kokoa ho an'ny akanjo ny peratra volafotsy na rozotra dia azonao atao ny mamelona azy ireo amim-pahavitrihana miaraka amin'ny fanampian'ity fanadiovana firavaka ity. Namboarina niaraka tamin'ny harona namboarina namboarina, ka azonao atao ny mamela ireo tapa-poavam-peo miorim-paka ao anaty vahaolana mandritra ny alina, fa - ho an'ny firavaka sy ny metaly mora vidy kokoa - ianao dia mila manongotra sy mikosoka moramora amin'ny borosy fotsiny.
Olona ankafizin'ny olona indrindra any Amazon, ity matotra akupresy ity dia "fandriana fantsika" izay tena tianao handry. Ampianarina teboka acu-an'arivony izy io, ary rehefa mandry azy ireo ianao dia hiasa hampiroborobo ny mivezivezy, mihena ny adin-tsaina, manohana fivoaran'ny torimaso tsara ary hanamaivana ny fanaintainana. Hoy ny mpamaky iray nanoratra hoe: “Nahazo izany aho satria voan'ny valahana mafy ary somary mafy ny valahana ary ny lamosiko ambony ary tsy mahavita mihetsiketsika matetika aho. [...]. Rehefa afaka minitra vitsivitsy, dia nanomboka may, fa tamin'ny fomba tsara. Hitako fa nanidy ny masoko aho ary naka aina. Rehefa nifoha aho dia tena nahatsapa ny fahasamihafana! ”
Ny ray aman-dreny amin'ny biby dia tia an'ity vakim-tànana miendrika lozika ity izay misy fantsom-bika vita amin'ny vy izay manala ny volo sy ny volon'ny alika amin'ny topholstie. Tena tsara ho an'ny fanao amin'ny karipetra, ny haingam-pandeha ary ny tohatra, ary ny tady herinaratra 16-tongotra manome anao halavola be amin'ny tora-tanana.
Eny, misy fomba voajanahary hivoahana ny kiraro akanjo ary ity tsato-bolongana ity dia manaporofo izany. Namboarina tamin'ny menaka mangatsiaka toy ny menaka voanio sy menaka voasarimakirana, saro-baho ny manala na inona na inona avy amin'ny divay mena ho an'ny ranomainty ahosotra. Ary ny tompon'andraikitra dia nianiana tamin'ny valiny - nanoratra ny iray hoe, "Notehirizina akanjo be dia be nankany amin'ny fako."
Mifehy ny mpanamboatra kafe, mpankafy na efitrano fandraisam-bahiny na aiza na aiza misy eran'izao tontolo izao miaraka amin'ireto fonenana marani-tsaina ireto izay mifanentana amin'ny fampiharana maimaim-poana amin'ny telefaona. Na tsara kokoa aza dia azonao atao ny mampiasa azy ireo hametrahana fandaharam-potoana ho an'ireo fitaovana ireo, ka tsy mila tadidinao ny mamono ny jiro rehefa miala amin'ny trano ianao. Ary tsara kokoa (mbola eto indray) dia azonao atao ny mampiasa an'i Alexa na Google Home mba hifehezana ny tsirairay.
Manaova soa amin'ny tenanao ary mividiana ireny tariby mahery vaika sy maharitra lava vita amin'ny nylon io. Fanampin'izany, amin'ny 10 metatra ny halavany, tsy mila miakatra eo ambonin'ny rindrina ianao amin'ny manaraka mila antso raha toa ka mandoa ny telefaoninao. Ny fonosana tsirairay dia misy telo.
Rehefa mikasika ny fitazonana ny hafanana fisotro, io tavoahangy vy matevina io dia manalavitra ny tsara indrindra amin'izy ireo. Mihena sy voaroy ao anaty vatan-tantely, dia mijanona hatrany ny zava-pisotro mangatsiaka atohoka mandritra ny 41 ora ary ny zava-pisotro mahamay hatramin'ny 18 andro. Hita amin'ny habe telo sy loko 16, toy ny onyx, manga suede, ary ny hazo teakwood no aseho eto.
Misy fomba tsara kokoa hisotroana sakamalaho, ary misy ifandraisany amin'ireo ozinina ranomandry izay manao cubes sy spheres lehibe kokoa. Matetika izy ireo dia mihena noho ny cubes de mody, ary midika izany fa mihetsiketsika ny zava-pisotro ataonao, nefa tsy mandena. Ary vita avy amin'ny silicone mora ampiasaina izy ireo, izay manamora ny fivoahan'ny tsirairay isaky ny mandeha.
Ataovy sambatra ny lamosinao - na dia mandany ora maro eo amin'ny latabatrao ianao - amin'ity ondana lumbar ity. Namboarina tamin'ny foza fahatsiarovana malefaka sy manohana, dia manohana tsipika ara-dàlana mety hisorohana ny fanaintainan'ny aretin-kozatra sy ny hozatra ary ny tadiny roa mifono elatra manodidina ny sezakelinao mba hihazonana azy io am-pilaminana. "Voavonjy ny lamosiko" hoy ny mpanoratra iray.